2010-04-17 @ 23:07 in Politika
Fony nanana ny lazany ny mpitondra fivavahana iray fony tanora sady nanana ny lazany teo amin'ny sehatra politika ihany koa dia nitantara fa efa niova ny fomba fanenjehana na famotehana ny fiangonana. Tsy kianina mivantana na enjehina avy any ivelany intsony ny fiangonana fa atao izay hahatongavana ho lohany ka rehefa tonga eo amin'ny toerana tadiavina dia tarihina hivily lalana tsikelikely amin'izay ny fiangonana, ho very hasina ka tsy hisy dikany intsony izy ary dia ho rava ho azy avy eo satria tsy raharahian'ny besinimaro intsony. Toa tsapako izany toe-javatra izany eo amin'ny tolona ataon'ny legalista hatramin'ny herintaona ka mandraka ity androany.
Teo ny niady ho loha sy solontenan'ny legalista ka rehefa hitany fa voakisaka tsikelikely izy dia naleony niditra ho minisitra fa any no misy ny tombontsoa kokoa. Teo ny mody tsy hitahita mihitsy fa rehefa voatendry dia misehoseho indray, rehefa tsy tanteraka ny fifanarahana dia iny koa no milentika. Teo ny tsy mety tafiditra anaty lisitra mihitsy fony nisy ireny fifanarahana ireny ka toy ny nigafy ny tolona avy eo. Teo ny mpitarika te-hampiditra ny olona ao anaty gidragidra mandrakariva nefa potika tanteraka ny legalista raha vaomiditra amin'izay herisetra izay. Eo ny olona nampidirina ho mpitarika nefa toa manao izay hahapotika ny tolona hatrany no kendren'izy ireo. Tsy te-hitanisa intsony aho fa tena mahaletra ny mieritreritra ny toe-javatra satria toa maro amin'ireo mpitarika ireo no efa mamadika ny tolona amin'izao fotoana izao.
Tranga niseho farany tamin'ity herinandro ity no itarihako ny sainao mpamaky. Iny fa nosokafana ny faritry ny Blueprint Behoririka ambadiky ny Magro Behoririka hanohizana indray ny tolona anaty fefy mba tsy hiharan'ny famoretana ny mpitolona mpandala ny filaminana sy tsy tia ny korontana. Vao andro voalohany nanaovana ny fihaonana dia hipoka sahady ny kianja, mazava ho azy fa kelikely kokoa noho ny teny Ankorondrano. Fahombiazana sahady izany, inona ny nataon'ny mpitarika? Nambara avy hatrany fa hotontosaina eny amin'ny kianjan'Ambohijatovo ny fotoana amin'ny sabotsy ho avy izao. Gaga ny tena! inona no mampipendipendina hankanesana any amin'io toerana io sa sosotra ireo mpitarika fa mbola maro hatrany ireo vahoaka vonon-kitolona? Tao amiko tao dia tsy mpitarika intsony izany fa mpamadika. Tena tsy manana stratejia hafa ankoatra ny fanakiviana olona hianoka baomba mandatsa-dranomaso ve? Sao dia tetika efa lany daty kosa izany e?
Nandeha ny fotoana, nanambara ny televiziona iray fa tsy mbola nanao fangatahana haka ny kianjan'Ambohijatovo amin'ny Asabotsy izany ireo mpitarika ireo. Na dia ninia ny hangina tsy hilaza ny hevitro aza aho dia niboraka ho azy ny fahatezerako. Tena famotehana ny tolona mihitsy izao, mpandala ny ara-dalàna ve ianao dia toa tarihinao any amin'ny tsy fanarahan-dalàna ny olona? Nisy avy hatrany ny namaly ahy fa fanosoram-potaka fotsiny izany fa raha tsy mpitarika adala koa tsy hahalala izay tokony ataony. Asabotsy mifankahita ary hahita azy tsara! hoy aho. Zoma: nalefa teny amin'ny tiko Tanjombato ny tolona: tsy nasiaka loatra aho satria mba misy koa ny olona akaiky iny toerana iny haneho ny heviny.
Zoma alina: nisy zavatra nipoaka ny teny amin'ny toby mpitsinjara solika ana orinasa frantsay. Iza no mahazo tombotsoa amin'ny fanapoahana tobin-dasantsy tahaka izany ary iza no ahiahiana avy hatrany? Na dia manambara endrika grenady aza ireo nanatri-maso tamin'io toe-draharaha dia misy ny manam-pahefana kinga amin'ny filazana fa baomba namboarina indray io... izany hoe te-hanameloka ny legalista ankolaka izy. Fepetra raisina voalohany: tsy maintsy masiaka amin'izay mety ho fidinana an-dalambe ataon'ny legalista. Mazava loatra fa nahomby tamin'izay nokendreny ho tohin'ny tantara izay nandefa io grenady tamin'ny tobin-dasantsy io. Vinavinako izany saingy tsy maintsy araka ny fizotran'ny raharaha tsinona.
Tonga ny Asabotsy, tsy nanambara ampahibemaso ny fanovana ny zavatra tian-katao ny mpitarika legalista, gazety iray nivoaka io andro io no mba nahitako fa tsy hihetsika eo Behoririka indray ny tolona ho fitandroana ny ain'ny olona. Tsy nilazana na inona na inona ny tany amin'ny fampitam-baovao fanarahan'ny mpandala ny ara-dalàna. Inona no dikan'izany? Na dia be aza ireo nanam-pikasana ny hivory io andron'ny Asabotsy io dia efa voky baomba manempotra izy ireo ka tsy hitonantonana eny Ambohijatovo izany. Vokany: Vitsy tsy araka ny nanampoizana azy ny isan'ny olona tonga teny Behoririka. Na ireo mpandeha amin'ny tolona azy dia naleony nanao zavatra hafa. Izay ve no tanjona tao amin'ireo mpitarika efa mpamadika eo imasoko ireo? Dia manahy sahady aho fa dia haveriny indray io fahadisoana niniana io fa amin'ny Asabotsy ho avy izao vao ho eny Ambohijatovo amin'izay. Dia ireo lazaina ho tanora tsy haiko hoe avy aiza ireo tsy mankasitraka ilay tsy fidinana an-dalambe... Hery tsy mitovy ve dia mbola hanao inona ihany sa voakarama hanakorontana rehefa misy ilay tahaka izay?
Miala tsiny aho raha manakiana ampahibemaso ny mpitarika ny tolona legalista satria be loatra ny fahadisoana ataon'izy ireo ary iniana ireny fahadisoana ireny amiko. Amiko dia misy ireo tsy menatry ny handainga rehefa mikabary amin'izy ireo: Lazaina fa efa vonona ao Ambohitsorohitra ny lalampanorenana vaovao mametraka an'i Madagasikara ho Departemanta Frantsay... tena fanimbazimbana ny tolona ataon'ny legalista ho fampielezana tsaho ny filazana tahaka izany. Ajanony ny fanaovana tsahotsaho fa itondray porofo mazava ny olona, mahatonga ireo hafa hieritreritra hoe mba vendrana koa ireo legalista ireto manaiky fahanana abobo tahaka izany. Fandrangitana ny olona mba hanao inona moa ny fanambarana zavatra tahaka izany? Rehefa tolona mandala ny filaminana no atao dia tohizo amin'izany fa aza manaiky hobaikobaikoan'ny sasany hivoaka ny vala mandrakariva. Na dia maro aza ny zavatra tiako hosoratana toy ilay "tsy fanonganam-panjakana" dia hatreo ihany aloha ny soratana.
Aoka handinika ny tsirairay fa dia misy mihitsy ny manao zinona ny tolon'ny legalista ary avy ao anatiny mihitsy sady lohandohany ireo mamily ny tolon'ny mpandala ny ara-dalàna ho lasa tsinontsinona sy tsy mikendry afa-tsy ny hahatezitra ireo mafana fo mbola tsy kivy hatramin'izao na dia efa herintaona mahery aza izay ny nanaovana ny tolona. Deraina kosa aloha ireo olona ireo amin'ny fikirizany.
Jentilisa, alahady 18 avrily amin'ny 01:05 maraina
PS: efa mivoaka an-tserasera izao ny gazety Tia Tanindrazana mpivoaka eto Madagasikara koa dia tsiditsidiho ihany na dia tsy ahitana ireo sariitatra tena manintona ny besinimaro eto an-toerana aza.